गृहपृष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बेलडाँडीमा पक्राउपरेको ब्राउन सुगर नष्ट गरियो
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका १० सडकघाट क्षेत्रबाट यसै १८ गते लागु औषध ब्राउन सुगर सहित दुई भारतीय नागरिकले ल्याएको ब्राउन सुगर बेलडाँडी ईलाका प्रहरी कार्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधी र पत्रकारको रहोबरमा नष्ट गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
१८ गते नेपाल प्रहरीको क्षेत्रीय अनुसन्धान टिम(आरआईटी) र इलाका प्रहरी कार्यालय बेलडाँडीको संयुक्त टोलीले सडकघाटबाट दुई जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो । नेपाल तर्फ बेच्न ल्याईरहेको अवस्थामा भारतीय नागरिकको साथबाट ब्राउन सुगर सहित बरामद गरि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरुले ल्याएको केहि परिक्षणका लागि माथी पठाएको र १९. ३४० मिलीग्राम ब्राउन सुगर नष्ट गरेको बेलडाँडी प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र सिंहले बेलडाँडी पोष्टलाई जानकारी गराउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रकृयागत लागुऔषध औषध ओसारपसार सम्वन्धि कारवाही प्रकृया अघि बढेको बताउनु भयो । आफुहरुको टोली लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सिमा क्षेत्रमा गस्ती बढाएको बताउनु भयो ।
भारतको पिलिभित कम्भोजनगर पतैयाका गोबिन्द सिह र राजबिर सिहलाई उप्पर कारवाही प्रकृया अघि बढी सकेको बताए । अहिले पक्राउ गरिएका दुवै जना भारतीय नागरिक इलाका प्रहरी कार्यालय बेलडाँडीमा राखिएको छ । भारतीय नागरिककै कारण नेपाली युवक लागु औषधमा संलग्न हुन थालेका छन् भने बेलडाँडी, बेलौरी सुदूरपश्चिमकै लागुऔषध ओसारपसारको एक नं. चोरी नाका बन्न लागेको प्रति स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले अझै मेहेनत गर्नुपर्ने स्थानीयहरुको भनाई छ । ब्राउन सुगर खानेहरुलाई डर नहुने, जे पनि गर्न हिम्मत आउने हुनाले समुदायमा र्हिसात्मक घटना बढी हुन थालेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।